အဏ္ဏဝါလူမီနီယံပန်းကန် | YK လူမီနီယမ်
လူမီနီယမ်စာရွက် / ပြား
လူမီနီယမ်ပြွန် / ပိုက်
စီးပွားရေးဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူ, ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိနိုင်ငံများမှတင်သွင်းမှုနှင့်ပို့ကုန်ကုန်သွယ်မှုပမာဏသည်အရှိန်အဟုန်ဖြင့်တိုးတက်လျက်ရှိသည်. ထို့ကြောင့်, သမုဒ္ဒရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်စည်လဲလှယ်ရေးအတွက်အရေးကြီးဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ထို့ကြောင့်ကုန်တင်ယာဉ်အသွားအလာတိုးမြှင့်နိုင်ရန်အတွက်ကြီးမားသောသင်္ဘောကြီးများလိုအပ်သည်. ပေါ့ပါးသောအယူအဆများပေါ်ပေါက်လာမှုနှင့်အတူ, ပေါ့ပါးသောသင်္ဘောတည်ဆောက်ရေးပစ္စည်းများလည်းပေါ်လာသည်, သို့သော်ကြာရှည်ခံသူများသည်အလူမီနီယံသင်္ဘောများဖြစ်ဆဲဖြစ်သည်.
လက်ရှိအချိန်မှာ, အဏ္ဏဝါလူမီနီယံပြားများအတွက်စျေးကွက်ဝယ်လိုအားတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်တိုးပွားလာသည်, အရည်အသွေးမြင့်အဏ္ဏဝါအလူမီနီယံပြားများသည်ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပရှိဖောက်သည်များအတွက် ပို၍ ပင်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်စွမ်းရှိသည်. Tianjin Yikuo အလူမီနီယံကုမ္ပဏီ, Ltd. အလူမီနီယမ်သည်အဏ္ဏဝါအလူမီနီယံပြားများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်တင်းကျပ်သောလိုအပ်ချက်များရှိသည်. ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအထူးကောင်းမွန်မှုကြောင့် Yikuo Aluminium ကိုအမျိုးသားအဆင့်အတန်းခွဲခြားသောအဖွဲ့အစည်း ၅ ခုမှအသိအမှတ်ပြုထားသည်, အမည်ရ: China Classification Society (CCS) နှင့်နော်ဝေခွဲခြားရေးအသင်း (DNV), သင်္ဘော၏အမေရိကန်ဗျူရို (ABS), ပြင်သစ်ဗျူရို Veritas (BV), သင်္ဘောလွိုက်ရဲ့မှတ်ပုံတင်မည် (LR), ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးအာမခံသည်. ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးအာမခံပါသည်. 5052 လူမီနီယံပန်းကန်, 5083 လူမီနီယံပန်းကန်, 5086 လူမီနီယံပန်းကန်, 6061 လူမီနီယံပန်းကန်, စသည်တို့. Yikuo Aluminium ၏ရောင်းအားကောင်းသောအလူမီနီယံပြားများအားလုံး.
စီးရီး5ထုတ်ကုန်များသောအားဖြင့်လူမီနီယမ် - မဂ္ဂနီစီယမ်သတ္တုစပ်များဖြစ်သည်, သည်အခြားသဲလွန်စဒြပ်စင်၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏနှင့်အတူ, နှင့်လူသုံးအများဆုံးလူမီနီယံဖြစ်ကြသည်. သံချေးတက်ခြင်းနှင့်ချေးခြင်းများကြောင့်ဖြစ်သည်, သူတို့ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အစွမ်းသတ္တိရှိသည်. ထို့ကြောင့်, ၎င်းကိုစိုစွတ်သောနှင့်တောက်ပသောနေရာများတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်, ထိုကဲ့သို့သောအဏ္ဏဝါလယ်ပြင်၌သင်္ဘောများကဲ့သို့. ၎င်းကိုမော်တော်ယာဉ်များတွင်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်, လေယာဉ်ဂဟေအစိတ်အပိုင်းများ, မြေအောက်ရထားလမ်း, ဖိအားရေယာဉ်များ (ထိုကဲ့သို့သောအရည်အကြံပေးအဖွဲ့ထရပ်ကားအဖြစ်, အအေးယာဉ်များ, reefer ကွန်တိန်နာ) တင်းကျပ်သောမီးကာကွယ်မှုလိုအပ်သည်, အအေးပစ္စည်း, ရုပ်မြင်သံကြားတာဝါတိုင်, တူးဖော်ခြင်းပစ္စည်းကိရိယာများ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ, etc.The အမျိုးအစားသတ္တုစပ်အမျိုးအစားများသင်္ဘောပြားအဖြစ်အသုံးပြုကြသည် 5052 လူမီနီယံပန်းကန်, 5083 လူမီနီယံပန်းကန်, နှင့် 5086 လူမီနီယံပန်းကန်.
စီးရီး6ထုတ်ကုန်များသည်အလူမီနီယမ်မဂ္ဂနီစီယမ်ဆီလီကွန်သတ္တုစပ်ဖြစ်သည်, အရာတို့တွင်သင်္ဘောဘုတ်အတွက်အသုံးပြုအသုံးအများဆုံးအလွိုင်းသည် 6061 လူမီနီယံပန်းကန်. 6061 လူမီနီယံစာရွက်ကောင်းသောချေးခံနိုင်ရည်ရှိသည်, မြင့်မားသောခိုင်မာခြင်း, အပြောင်းအလဲနဲ့ပြီးနောက်အဘယ်သူမျှမပုံပျက်သော, လွယ်ကူသောအရောင်, ကောင်းသောဒါဓာတ်တိုးအကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်. ၎င်းသည်လေမှုတ်ပြီးနောက်ကောင်းသောလည်ပတ်နိုင်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်သည်. အထူးသဖြင့်၎င်းသည် corrosion cracking ကိုဖိစီးရန်သဘောထားမရှိချေ, နှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောဂဟေနှင့်အအေးကောင်းသောလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်. Mingtai လူမီနီယံသည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောထုတ်လုပ်နိုင်သည် 6061 လူမီနီယံပန်းကန်, 2650mm အထိအကျယ်, တရုတ်သည်အလွန်ကျယ်ပြန့်သောကျယ်ပြန့်သောပန်းကန်အကျယ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လုပ်သူများထုတ်လုပ်နိုင်သည်. ၎င်းကိုသင်္ဘောတင်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်, 6061 အလူမီနီယမ်ပြားသည်လက်ကိုင်ဖုန်းကဒ်အထိုင်များတွင်လည်းလူကြိုက်များသည်, မိုဘိုင်းဖုန်းခွံ, မှို, မော်တော်ကားများ, တိကျသောစက်, စသည်တို့.
[ဆက်သွယ်ရန်-form-7 id=”6″ title =”ဆက်သွယ်ရန်ပုံစံ ၁″]
မူပိုင်ခွင့်များအား YIKUO Aluminium မှရရှိသည်
Yuanjiabao, Wuqing ခရိုင်, Tianjin တရုတ်
တနင်္လာနေ့မှစနေနေ့အထိ: 8နံနက် ၆း၀၀ နာရီ
တနင်္ဂနွေနေ့: 9နံနက် ၄း၀၀ နာရီ
Support Hours သည် 24/7 နေ့တိုင်း
မူပိုင်ခွင့်များအား YIKUO Aluminium မှရရှိသည် www.yk-al.com
အားလုံးမေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များအဘို့, ကျေးဇူးပြုပြီးအောက်ပါပုံစံကိုဖြည့်ပါ (* လိုအပ်သည်) ကျွန်တော်တို့ကိုတိုတောင်းတဲ့သတင်းစကားကိုပေးပို့ဖို့, ငါတို့သည်လည်းမြန်နိုင်သမျှမြန်မြန်သင်တို့ထံသို့ပြန်လာကြလိမ့်မည်.